आर्यन खानको जमानतको फैसला आज, के उनलाई भाजपाले फसाएको हो ? – Jagaran Nepal
आर्यन खानको जमानतको फैसला आज, के उनलाई भाजपाले फसाएको हो ?
काठमाडौं। मुम्बइ क्रुज ड्र,’ग्स पार्टी केसमा अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानको जमानत याचिकामाथि आज मुम्बइको किला कोर्टमा सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार अदालतले उनलाई ७ अक्टोबरसम्म हि,’रासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो ।
आर्यनको साथमा अरबाज मर्चेन्ट र मुनमुन धमेचाको जमानत याचिकामा पनि आजै सुनुवाइ हुँदैछ ।यही बीच महाराष्ट्र सरकारका क्याबिनेट मन्त्री नवाब मलिकले यो पूरै घटना फ,’र्जी भएको आरोप लगाएका छन् । पत्रकार सम्मेलन गर्दै नवाब मलिकले भने ‘आर्यन खानलाई फ,’साउने उद्देश्यले यो सब गरिएको हो ।
एनसीबीको यो कारवाहीमा बीजेपीको हात छ र यो गि,’रफ्तारी पूरै राजनीतिबाट प्रेरित छ । पछिल्लो एक महिनादेखि क्रा,’इम रिपोर्टसलाई यो जानकारी पठाइएको थियो कि अबको निशाना शाहरुख खान हुनेछन् ।’नबाब मलिकका अनुसार आर्यन खानलाई ए,’नसीबीकहाँ ल्याउने र सेल्फी लिने केपी गोस्वामी र मनिष भानुशाली बीजेपीका नेता हुन् ।
एनसीबीले भने मलिकको आरोपमा प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई आ,’धारहीन र गलत भनेको छ । खासमा आर्यन खान जुन दिन गि,’रफ्तार भएका थिए त्यस दिन एक व्यक्तिसँग उनको सेल्फी भाइरल भएपछि यो वि,’वाद सुरु भएको हो ।यो सेल्फी आर्यन एनसीबीको हि,’रासतमा हुँदा लिइएको थियो ।
सेल्फी सार्वजनिक भएपछि ए,’नसीबीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका थिए । वि,’वाद भएपछि एनसीबीले सेल्फी लिने व्यक्ति आफ्नो विभागको नभएको प्रस्ट पारेको थियो । नबाब मलिकको दावीअनुसार सेल्फीमा देखिने व्यक्ति बीजेपीका हुन् ।